निषेध हत्या | Apg29
सबै प्रकारका हत्यामाथि प्रतिबन्ध लगाउनु ê
अर्को व्यक्तिको हत्या अपरिवर्तनीय छ। हत्या हत्या हो र पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाउनु पर्छ!
प्रस्थान २०:१ Thou “तिमीले कसैलाई हत्या गर्नु हुँदैन।
मलाई लाग्छ कि सबै प्रकारका हत्यामा प्रतिबन्ध लगाउनु पर्छ।
यो पनि निषेधित हुनुपर्दछ:
मैले कतै पढेको छु कि हरेक दोस्रो स्विडेड मृत्युदण्डको लागि हो, तर मृत्युदण्डले कसैलाई राम्रो व्यक्ति बनाउँदैन।
मानिसहरूले येशूको बारेमा सुन्नु आवश्यक छ कि तिनीहरूले उहाँलाई ग्रहण गर्न सक्नेछन् र मुक्ति पाउनेछन्।
हत्या हत्या हो र पूर्ण रूपमा प्रतिबन्धित हुनुपर्दछ। अर्को व्यक्तिको हत्या अपरिवर्तनीय छ।
इयुथेनासिया स्विडेनी मानिसहरूलाई अधिक र अधिक क्रिम्प हुँदैछ कि यो कानुनी हुनु पर्छ। हालसालै, एक डाक्टरले बिरामीलाई मर्न "सहयोग" गरे।
अहँ, यो त्यस्तो थिएन जसले पिसीहरू भरिभराउ थियो तर उसले ती प्राप्त गर्यो र उभियो।
प्रत्येक वर्ष आमा भित्र भित्र 40०,००० जनाको ज्यान जान्छ।
हत्या हत्या हो र पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाउनु पर्छ!
अर्को व्यक्तिको हत्या अपरिवर्तनीय छ।
Vecka 10, måndag 8 mars 2021 kl. 10:11